Ny programa beta an'ny Microsoft, Windows Insider, dia mihoatra ny mpampiasa 10 tapitrisa | Vaovao momba ny gadget
Ny programa beta an'ny Microsoft, Windows Insider, dia mihoatra ny mpampiasa 10 tapitrisa
Ignatius Room | | About us, solosaina
Isaky ny maniry ny handefa fampiharana eny an-tsena ny mpamorona iray, alohan'ny hamoahana azy amin'ny fomba ofisialy, dia miditra amin'ny dingana beta izy, dingana iray anazahan'ny mpampiasa sasany ny fampiharana hanamarinana fa mandeha tsara izany. Ny kinova beta amin'ny fampiharana mitovy dia mety misy maromaro, arakaraka ny isan'ny olana amin'ny asa na hadisoana hita. Nefa tsy vitan'ny fampiharana izany, fa fahita amin'ny rafitra fiasa. Nandritra ny roa taona dia nisokatra tamin'ny mpampiasa i Apple ny mety hisedrana ny beta an'ny iOS sy macOS, ka manitatra ny valiny raha tokony hoferana tsy ho an'ny mpamorona irery ny fampiasana azy. Saingy tsy izy irery.
Volana maro talohan'ny nanombohan'ny Windows 10, tamin'ny Oktobra 2014 ary tamin'ny fomba voafetra, Microosoft dia nanangana rafitra betas ho an'ny daholobe ahafahan'ny mpampiasa mametraka ny betas farany an'ny Windows 10, hahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana azy. Ity programa ity dia antsoina hoe Windows Insider, programa iray izay, araka ny tarehimarika farany natolotry ny Redmond goavambe, dia nahatratra mpampiasa 10 tapitrisa. Windows Insider no programa beta ho an'ny daholobe voalohany an'ny orinasa ho an'ny Windows, saingy nahita ny fahombiazany, rehefa mandeha ny fotoana Nitarina tamin'ny kinova finday an'ny Windows 10, ny suite an'ny Office, Skype ary Xbox.
Betsaka no Ireo mpampiasa Windows Insider izay te-hiaina maso voalohany ny vaovao rehetra fa hitondra antsika ny kinova Windows ho avy, mpampiasa mahalala fa ny fiasan'ny tranobe tsirairay navoakan'ny orinasa dia mety hanolotra tsy fahatomombanana, fianjerana ary hafa, satria tsy kinova farany io. Raha mampiasa ny PC-nao hiasa ianao dia tsy tsara ny mampiasa ny beta, indrindra noho ny fitoniana atolotray antsika, na dia matetika aza dia isaina amin'ny rantsan-tànana ny olana amin'ny fahombiazana sy ny asa.
Raha te hampavitrika sy ho anisan'ny fandaharana dia mila mankany amin'ny fikirana Windows> Fanavaozana sy fiarovana fotsiny isika. Amin'ity fizarana ity dia mandeha amin'ny Windows Update izahay ary tsindrio ny Advanced Safid. Tsindrio avy eo amin'ny ORaiso ny fananganana Insider Preview.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny programa beta an'ny Microsoft, Windows Insider, dia mihoatra ny mpampiasa 10 tapitrisa
Ny Apple Watch manaraka dia mety ho tonga miaraka amin'ny LTE
Ny Moto G5 Plus dia efa azo zakaina ao Espana